एक व्यक्तिगत र हृदय-अनुभवी धन्यवाद तपाईंलाई Martech Zone
एक व्यक्तिगत र हृदय-अनुभवी धन्यवाद
आइतबार, डिसेम्बर 24, 2006 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
यो मेरो अनलाइन कार्यको लागि अविश्वसनीय मौसम हो। आज मेरो ब्लग दुबै मा उल्लेख गरिएको थियो जॉन चौ र सेठ गोडिनको ब्लग र म हालै थिए को प्याट कोयलको ब्लगमा एक धेरै चापलुसी ब्लग प्रविष्टिको एक शीर्षक! पछिल्लो हप्ता, माईक रूपान्तरण मलाई एक "Z-lister" को रूपमा उल्लेख गर्न पर्याप्त अनुकम्पापूर्ण थियो। मलाई उनको निःस्वार्थ पदोन्नति मेरो सेठ 70० भन्दा बढी मा उल्लेख छ, आज सेठ Godin ब्लग मा उल्लेख सहित।
पछिल्लो केहि महिनाहरुमा, मेरो ब्लग मा आसमान छ यातायात र अधिकार मा।
यी सबै विकास वास्तवमा मेरो विशेषज्ञताबाट भएको छैन। यो जानकारी क्याप्चर र प्रसारको लागि मेरो भोकबाट आएको हो र आफ्नो को साझा आफ्नो ज्ञान र विशेषज्ञता। म तपाइँलाई र हरेकलाई धन्यवाद दिन अवसर मनपर्दछु। वास्तवमा, यदि म कामको साथ अर्को बर्षमा कुनै पनि यात्रा गर्दछु भने, मेरो लक्ष्यहरूमध्ये एउटा त्यस्तो मात्र गर्नु हो। मँ तपाईं कहाँ जाँदैछु जान्न दिनेछु, र हामी एक पेय वा कफीको लागि भेट्नेछौं। यदि तपाईं इन्डी आउँदै हुनुहुन्छ, कृपया मलाई बताउन नहिचकिचाउनुहोस्।
कहिलेकाँही ब्लगले मेरो दिनको धेरै खपत गर्दछ, तर तपाई र म जे गरिरहेको छु सबैले काम गरिरहेको देखिन्छ।
म मेरो धेरै नै प्रविष्टिहरूमा मूल शीर्षक प्रदान गर्ने प्रयास गर्दछु। यसैले मेरो ब्लग छलफलको हिस्सा होइन वा समाचारलाई दोहोर्‍याउँदै, यो कुराकानीको बारेमा हो। त्यो गाह्रो काम हो, तर यसको भुक्तानी भइरहेको छ।
प्रत्येक चोटि जब म मेरो अन्य ब्ल्ग वा ब्लगमा मेरो ब्लगमा सन्दर्भ देख्छु, म जवाफ दिन र व्यक्तिलाई धन्यवाद दिने प्रयास गर्छु - यदि उनीहरूको पोष्ट सकारात्मक छैन भने पनि (विशेष गरी यदि यो छैन भने)। मान छलफलमा छ। जे होस्, म सँधै (ठीक छ, विरलै) सही हुँदैन।
म समूह ब्लगिंग गतिविधिहरुमा भाग लिन्छु। यदि Problogger तपाईको दैनिक ब्लगिंग रुटिनको अंश हैन, यसलाई बनाउनुहोस्। डारेन प्राय: ग्रुप प्रोजेक्टहरूको साथ ब्लाग क्षेत्रलाई चुनौती दिन्छन्। तिनीहरू सबै ध्यान र एक्सपोजर को एक धेरै प्राप्त।
मैले सिकेको चीजहरू साझा गर्छु।
म सोध्ने कोहीलाई पनि मद्दत गर्ने प्रयास गर्छु। यसले मलाई धेरै जसो समस्यामा पार्दछ, तर यो मैले दिनु पर्ने हो। यो मेरो 'उपस्थित' हो, यदि तपाईं हुनेछ।
म शीर्षकहरूलाई अन्य ब्लगरसँग जोड्दछु। यदि मैले छलफलको विषय देखें जुन मैले पढेको एक ब्लगरको विशेषज्ञ हो भने, म जहिले पनि ती दुईलाई जोड्ने प्रयास गर्छु। एक नेटवर्क के हो यदि तपाईं वास्तवमा जडानहरू बनाउन मद्दत गर्नुहुन्न भने?
तपाईं मेरो लागि मेरो ब्लग प्रचार गर्न जारी छ।
धन्यवाद बोल्दै ...
म अहिले स्टारबकको बसिरहेको छु। इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा, आज म अलि अलि तल गएँ कि म आज राती वा भोलि आफ्ना बच्चाहरूसँग छैन। तिनीहरू आफ्नो आमा र स्टेफमेमिलि संग एक महान क्रिसमस खर्च गर्दैछन्। जब म लेख्दै थिएँ, मैले मेरो साथीबाट ईमेल अपडेट प्राप्त गरें, ग्लेन, जो मोजाम्बिकमा एक मिशनमा छ र यसले मलाई एकदमै राम्रो महसुस गरेकोमा बाउन्स गरियो कि म धन्यवादी हुनु पर्छ।
यसले मलाई सम्झना गरायो कि अन्यले छुट्टीको मौसममा यति धेरै त्यागहरू गरिरहेका छन्। म वास्तवमै केहि त्याग गरिरहेको छैन ... मेरो पेपरमिन्ट मोचासँग आरामदायी कफी घरमा बस्दैछु। को बेरीम्यान उनीहरूको सम्पूर्ण परिवारलाई शिक्षा र राम्रो शब्द फैलाउन सहयोगका लागि मोजाम्बिकमा एक मिशनमा लगे। के तिमि सोच्न सक्छौ? मलाई ती चीजहरूको लागि अविश्वसनीय आदर छ।
र म हाम्रो सेना सम्झना छ। मरुभूमि शिल्ड / मरुभूमि तूफानको बखत म months महिना विदेशमा थिएँ र क्रिसमसलाई फारसको खाडीमा तैरिरहेको थियो। यो एक मौसमको बीचमा टाढा हुन दिक्कलाग्दो छ जुन प्राय परिवारहरू सँगै तान्दछ। भगवानले हाम्रो सेनालाई, तिनीहरूका परिवारहरूलाई, र ती परिवारहरूलाई आशीर्वाद दिनुहोस् जुन यति धेरै गुमाइसकेका छन्।
तपाइँ सबैलाई धन्यवाद! तपाईंले वास्तवमै मेरो लागि यो अविश्वसनीय छुट्टी बनाउनु भयो।
के तपाईंको साइट, ब्लग, वा फीड जियोट्याग छ?
स्नातक क्रिसमस डिनर
डिसे 25, 2006 मा 12: 08 AM
सबै कडा परिश्रमको मूल्य चुकाउनु भएकोमा बधाई छ। म तपाईको ब्लग पढ्न रमाईलो गर्छु, म हरेक हप्ता टिप्पणी नगरे पनि। शुभ बिदा र कडा परिश्रम जारी राख्नुहोस्।